Kedu ihe gbara ọchịchịrị na gịnị ka ọ bụ maka ya? | Netwọk Mgbasa Ozi
Na mbara igwe anyị, ihe niile anyị nwere ike imetụ aka, hụ, nụ isi ma ọ bụ nụ ọ bụ naanị 5% nke ihe niile dị. Okwu anyị ji emekọ ma hụ ihe dị ụkọ n’eluigwe na ala.
Ọ bụrụ na anyị maara naanị 5%, gịnị na-eme ndị ọzọ? Ihe akaebe na-eme ka mmadụ chee na 27% nke oke na ume nke eluigwe na ala bụ nke a na-akpọ ọchịchịrị. Ọ bụ ezie na ihe gbara ọchịchịrị ka bụ ezigbo ihe omimi taa, gịnị ka anyị maara banyere ihe gbara ọchịchịrị? Gịnị ka ọ bụ?
1 Ihe gbara ọchịchịrị
2 Kedu ka esi mara na ihe gbara ọchịchịrị dị ebe ahụ?
3 Kedu ihe gbara ọchịchịrị?
Ihe gbara ọchịchịrị
Eluigwe na ala mejupụtara ihe na ume. Anyị na-eji okwu metụtara oge n'oge niile n'ụbọchị. Kọmputa, ama anyị, okpokoro, wdg. Ihe mejupụtara ha bụ ihe nkịtị. Ma, eluigwe na ala anyị ọ bụghị ihe nkịtị, ma ihe gbara ọchịchịrị.
Enweghi ike iji onu ogugu hu ihe ojoo a, mana obu ihe n'enye uwa dum ihe ike. Ihe gbara ọchịchịrị enweghị ike ịhụ n’ihi na ọ bụ n’ime oghere dịkarịsịrị omimi na oyi na-atụ. Iji hụ ihe ndị dị na mbara igwe site na obere ụwa a ihe a na-eme bụ ịchọpụta radieshon, nke na-agabiga na mbara igwe. Igwe ndị a na-enye anyị ohere ịkọwapụta ọdịdị nke ihe gbara ọchịchịrị.
Ihe gbara ọchịchịrị anaghị ewepụta radieshon zuru ezu iji hụ, mana ọ nọ ebe ahụ ma jiri ya na akụrụngwa nyocha ya, iji hụ ka o si arụ ọrụ. Ọchịchịrị dị oyi na oji nke na ọ nweghị ihe ọ bụla, yabụ na ị nweghị ike ịhụ ya.
Maka enweghi ike nyocha ya, amaghi ihe ejiri ya mee. Ọ na-esote na enwere ike imeju ya neutrinos, WIMP particles, non-luminous gas ojii, ma ọ bụ ọbụna dwarf stars.
Kedu ka esi mara na ihe gbara ọchịchịrị dị ebe ahụ?
Ajuju a di ezigbo nma, ebe oburu na apughi imetu ya aka ma obu ihu ya, ogaghi adi. Nwere ike ịsị na ihe gbara ọchịchịrị bụ akụkụ nke echiche na echiche efu anyị, mana sayensị sitere na ihe akaebe.
Ọ bụ ezie na ịdị adị nke ihe gbara ọchịchịrị bụ naanị nkwuputa uche, ya bụ, ọ kabeghị aka bụ eziokwu ma doo anya, enwere ọtụtụ ihe akaebe na-egosi n'ụzọ doro anya na ọ dị.
Achọpụtara ya na 1933, mgbe F. Zwicky tụpụtara ịdị adị ya na nzaghachi na mmetụta ọ na-enweghị ike ịkọwa: ọsọ nke ụyọkọ kpakpando na-agagharị. O kweghị na ihe mmadụ nwere ike ịtụ anya ya mgbe omumu na ngosiputa emere. Achọpụtala nke a ogologo oge tupu ndị nyocha dị iche iche achọpụta ya.
Mgbe ụfọdụ mechara chọpụta, ịdị adị nke - uka nke gbanwere ohere na ike ndọda nke ihe ndị dị na mbara igwe, mana nke ahụ enweghị ike ịhụ. Otú ọ dị, ọ ga-enwerịrị ebe ahụ. Iji hụ mmetụta nke ihe gbara ọchịchịrị, mmadụ ga-ele anya na mbara igwe dị anya, dịka ụyọkọ kpakpando ndị ọzọ.
Kedu ihe gbara ọchịchịrị?
Ọ bụrụ na enweghị ike ịhụ, metụ, ma ọ bụ chọpụta ụzọ gbara ọchịchịrị n'ụzọ ọ bụla, gịnị kpatara anyị ji chọọ ịmata banyere ihe gbara ọchịchịrị? N’ụzọ bụ́ isi, ndị ọkà mmụta sayensị na-anwa ịchọta nkọwa banyere otú ihe ndị si aga n’eluigwe na-aga. Mmeghari nke ihe di na mbara igwe, inertia, big bang ... ihe niile nwere nkọwa ya ma ọ bụrụ na anyị ewebata ọnụnọ nke ihe gbara ọchịchịrị.
Ọchịchịrị na-arụ ọrụ n'ezie ịmara eluigwe na ala n'ụzọ chiri anya karị. Ọ bụ ntụzianya, ihe enyere anyị aka ịghọta nke ọma etu okwu anyị maara si arụ ọrụ, yana ikpughere anyị ihe anyị na-amaghị. Mụ ihe ndị anyị na-anaghị emekọrịta ihe nke ọma na-eme ka anyị mata akụkụ ụfọdụ nke eluigwe na ala anyị na-echetụbeghị n’echiche. Nke a ghọrọ ihe gbara ọchịchịrị na ngwa oru, karie nkwuputa, bara oke uru. Na na anyị enweghị ike ịhụ ya.
Ihe ọ bụla gbara ọchịchịrị, ọ dị mkpa na ebe ọ bụ na ihe mejupụtara ụwa niile anyị maara banyere ya. Na mgbakwunye, ọ nwere ike inye anyị ọtụtụ ngwọta maka ọrụ nke ụwa anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ihe gbara ọchịchịrị na gịnị ka ọ bụ maka ya?